Aussiedoodles: La kulan Einstein ee adduunka eyga - Taranka
Maxaad heli lahayd haddii aad isku dhex dartid laba eeyaha ugu caqliga badan, ee aadka loo jecel yahay ee dadka jecel? Aussiedoodle la jeclaan karo!
Sidoo kale loo yaqaan Aussie Poo ama Aussie Poodle , Isku darka 'Shepherd Poodle' ee Australiyaanka ah ayaa ah isu-ekaansho farxad leh oo kasbaday cinwaanka mid ka mid ah 'Einstein' ardayga canine adduunka. Diyaar ma u tahay inaad waxbadan barato? Nala joog oo sii wad rogrogmada.
Waa tan waxa ay tahay inaad ka ogaato eeygan cajiibka ah
Muxuu u eg yahay Aussiedoodle?
Dabeecad: Aussiedoodles ma yihiin eeyo qoys oo wanaagsan?
Waa tan sida loo daryeelo saaxiibkaa Aussiepoo
Ma leeyihiin dhibaatooyin caafimaad?
Mid baan rabaa! Sideen ku helaa Aussiedoodle?
Doodleyaal dheeri ah adiga!
Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka: Ma u baahan tahay inaad hesho Aussiedoodle?
Aussiedoodle waa mid ka mid ah waxa loogu yeero noocyada naqshadeeyayaasha oo in ka badan inta aan ognahay sii jira, laakiin qaar baa leh waxaa si ula kac ah loo abuuray tan iyo 1990-yadii Waqooyiga Ameerika.
Haddii aad tahay taageere isku dhafan, waxaad ka heli kartaa xoogaa yar oo yar yar oo leh labada waalidba sida Aussiedoodles, laakiin dadka badankood waxay raadiyaan F1 puppy - isku dhaf ah oo saafi ah Adhijirka Ustaraaliya iyo hufnaan Poodle .
Laakiin wali, maadaama tani ay tahay iskutallaab, Aussiepoos lagama diiwaangelin karo Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC).
Waa wax fiican inay jiraan ururo aqoonsan noocyada isku dhafan sida kuwa Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka (ACHC), kan Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga (DDKC), kan Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah (IDCR), iyo kan Diiwaan Geliyaha Tartanka (DBR).
Marka maxaa iyaga ka dhigaya eeyo waaweyn oo sidan ah? Qashin-qubkaani waa isku-darka tayada ugu wanaagsan ee waalidkood - tamarta iyo anshaxa shaqada ee Aussie iyo qosol iyo daacadnimada Poodle.
Sidaad filan lahayd, isku darka Australiyaanka Shepherd Poodle wuxuu dhaxli karaa waalidkiis; muuqaalka, laakiin had iyo jeer maahan 50/50.
Fido-kani wuxuu leeyahay dhego iyo indho fiiqan oo noqon kara hooska bunni ama mugdi, halka qaarkoodna yeelan karaan indho buluug ah.
Dabohoodu way dherernaan karaan waxyarna way qalloocin karaan sida Poodle, laakiin sidoo kale way ku soo xiran karaan oo ku gaabi karaan sida Adhijirka reer Australia.
Cabir: Immisa ayuu heli doonaa Aussiedoodle?
Guud ahaan, labka iyo dheddigga waa isku qiyaas. Waxay leeyihiin miisaan celcelis ahaan 25 ilaa 70 rodol (11 ilaa 32 kg) waana qiyaastii 10 ilaa 15 inji (25 ilaa 38 cm) sare garabka.
Aussiedoodles waxay leeyihiin cabbirro ballaaran oo kala duwan. Taasi waa sababta oo ah 'Aussie' ayaa lagu dhajin karaa mid ka mid ah saddexda cabbir Poodle: tooy , Guntin , ama heerka .
Daryeelayaasha yaryar ee Australiyaanka ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu abuuro nooc ka yar. Si kastaba ha noqotee, kuwa soosaarayaasha qaarkood waxay ujeedadoodu tahay inay sameeyaan toy ama mini Aussie Poos oo culeyskoodu ka hooseeyo 25 rodol (11 kg) iyo ka yar 10 inji (25 cm) .
Way adag tahay in la sheego goorta ay gaareen dhererkooda iyo culeyskooda oo buuxa. Habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo waa in lala hadlo af-hayeenkooda lana arko cabirka waalidku.
Haddii aad korsato eey oo aadan haysan qaab aad wax ku ogato, waa inaad u diyaar garowdaa waxyaabo yaab leh.
Haddii koritaanka eeyku si tartiib tartiib ah hoos ugu dhaco markuu lix bilood jirsado, waad qiyaasi kartaa inay u badan tahay inay dhex-dhexaad ilaa yar sii ahaan doonaan.
Laakiin haddii ay ku dhuftaan calaamaddaas lixda bilood ah oo aysan muujinin wax calaamado ah oo gaabis ah, waxaad ku heshay dhexdhexaad dhexdhexaad ah eeyga weyn ee gacmahaaga.
In kasta oo Aussie doodle uu ku noolaan karo nooc kasta oo guri ah, haddii ay helaan jimicsi ku filan, kala duwanaanshaha yar yar ayaa ku habboon nolosha guriga maxaa yeelay waxay ka heli karaan tamartooda meelaha yaryar.
Aussiedoodles ma yihiin kuwa loo yaqaan 'hypoallergenic'?
Milkiilayaasha qaarkood waxay yiraahdaan Aussiedoodles-kooda waa hypoallergenic , laakiin markasta dammaanad kama qaadi kartid cunug aan daadin haddii mid ka mid ah waalidku daadsho. Taasi waxay tiri, iskudhafkan ayaa noqon kara aan-daadasho hoose .
Intooda badani waa daadiyayaal xilliyeed leh jaakad hoosta ka dhacda xilliga gu'ga iyo deyrta. Sidaas darteed haddii aad xasaasiyad leedahay, isku darka Australiyaanka Shepherd Poodle ayaa laga yaabaa inaysan ahayn xulashada ugu fiican adiga.
Dharkooda ayaa noqon kara noocyo kala duwan oo qaabab kala duwan ah, laakiin way adag tahay in la sii saadaaliyo waxa aad heli doontid markii aad ku dhex abuurto nooc jilicsan oo duuban oo ku duuban nooc toosan oo daboolan.
Qaarkood waxay leeyihiin ruxruxo, curly, ama dhogor toosan . Waxay sidoo kale ku yimaadaan siyaalo kala duwan sida merle cas, buluug merle, madow iyo tan (oo sidoo kale loo yaqaan phantom), midab madow iyo casaan, sable, parti, ama xitaa midab adag xaalado dhif ah.
Haa, waa yihiin! In kasta oo ay noqon karaan nooc Einstein ah, eeyahaani kama baqayaan inay goof wareegaan, xirmada oo dhami waxay ku raaxeysan doonaan hadalladooda nacasnimada ah. Milkiilayaashoodu waxay ku sifeeyaan inay yihiin sheekooyin cayaareed oo jecel baashaal .
Waxaad daawan kartaa fiidiyowgan Aussiedoodles quruxsan oo qosol badan:
Waxaa laga yaabaa inay hadiyad kuu keenaan oo kaliya inaad ka jeexdid markii aad u gaarto oo aad carartid. Waxay jecel yihiin in la cayrsado, in la cayrsado, iyo in la jiido dagaalka.
Haddii aad rabto eey si adag oo deggan dhulka ugu sii jira, fiiri meelo kale. Eeyadan ayaa kala ah bouncy, boingy, boodboodayaal guga . Iska jir haddii aad leedahay deyr gaaban!
Waxba ma ahan waxa ay sameynayaan, waxay w qudhaanjada si ay ula socdaan dadkooda . Safraya? Keen Aussiedoodle. Shaqeynaya? U gee xafiiska. Ballan dhakhtar? Waan kaftamayaa! In kastoo, ay kugu soo biiri lahaayeen haddii aad u oggolaatid.
Faa’iido darrada ayaa ah in jacaylkaas oo dhan uu ku hungoobo markaad tagto, natiijaduna ay noqon karto kala-go'id walaac .
Haddii aad u maleyneyso in Aussiepoo uu seexan doono dabaqa, ka fikir markale. Waxay rabaan inaysan sariirta kula joogin oo keliya, laakiin sidoo kale waxay ku seexdaan barkintaada madaxooda (iyo mararka qaarkood badhida) midig wejigaaga.
Dabcan, waad ku tababaran kartaa inay seexdaan a sanduuq ama qol kale, laakiin iyagu weligood kama faraxsanaadaan sida ay ula joogaan aadamaha ay jecel yihiin.
Waxay yihiin eeyaha qoyska kaamil ah maxaa yeelay waxay ka taxaddaraan carruurta oo xitaa kaa caawin doona inaad xanaaneyso carruurta yaryar.
Dabcan, waa inaad had iyo jeer bartaa carruurta sida loola macaamilo eey kasta, iyo tan ka soo horjeedda, gaar ahaan marka xayawaankaaga xayawaanku ay yihiin bakoorad rambunctious ah.
Iska ilaali, in kastoo. Aussiedoodle ka weyn ayaa garaaci kara ilmaha haddii ay aad ugu faraxsan yihiin wadar ahaan. Xaqiiqdii waxaad ubaahan doontaa inaad tababarto saxaaradaada si aad uga hortagto inay taasi dhacdo.
Haddii aad baraysid isku darkaaga Poodle & Australian Shepherd inuu kuu ogolaado inaad ka tagto waqti ka waqti ama sida loola dhaqmo carruurta, furaha ayaa ah iswaafajin.
Tani waa a nooc caqli badan taasi waxay rabtaa inay kaa farxiso, sidaa darteed waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad u xaqiijiso markuu samaynayo waxa saxda ah.
Tusaale ahaan, markaad baxdo, sii Aussiedoodle-kaaga daaweyn oo ku abaal mari hadduu deggan yahay.
Markaad soo noqoto, u dhaqan sidii wax aan jirin oo kale oo weyn inaad maqnayd. Kadib, wakhti kadib, waxaad siin kartaa daaweyn ah inuu si wanaagsan u dhaqmay.
Qiyaastii yaryar, waxaad siin kartaa eygaaga daaweyn markii uu ixtiraamo oo deggan yahay. Ka hortag dabeecadaha faafiska ah adoo baraya inuu fadhiisto ama fadhiisto markuu carruurta ag joogo.
Aussiedoodles wax badan ma ciyey?
La kulan Ziggy, Mini Aussiedoodle - Isha Sawirka
Isku-dhafkan uma muuqato inuu sameeyo ciyo badan , laakiin sida eey kasta, waxay ku xirnaan doontaa sida loo soo barbaariyey loona tababaray.
Laakiin waalidkeed Aussie dartiis, mid ka mid ah waxyaabaha aad ka walaacsan tahay waxay noqon kartaa Aussiedoodle-kaaga oo isku dayaya inuu daaqo xayawaankaaga kale.
Si wanaagsan ayey ula jeedaan, laakiin waxay ka xanaajin kartaa dhallaankaaga dhogorta yar, sida bisadaha.
Laakiin ha ka welwelin, haddii ardaygaaga loola dhaqmo oo si habboon loo baro, ma helaan difaac ama dagaal .
Laakiin wax kale oo wanaagsan oo ay fido-kan ka dhaxashay waalidkeed Poodle waa jacaylka ay u qabaan biyaha iyo dabaasha. Shakhsiyaddooda ayaa ka dhigaysa iyaga kaliya ma aha xayawaanka la yaab leh, laakiin sidoo kale iyaguna waa daaweyn heer sare ah ama eeyaha adeegga .
Waxay kuxirantahay baaxadooda, Aussiedoodles waxay bixin kartaa adeegyo caafimaadka dhimirka sida fududeynta halganka dadka qaba PTSD, walwal, ama adeegyo jireed sida aragtida indhaha
Shakhsiyadooda xiisaha badan ayaa sidoo kale iyaga ka dhigaysa kuwo ku habboon inay ku farxaan dadka isbitaalada ama guryaha daryeelka.
Xitaa haddii eeygan naqshadeeyaha ah uu jecel yahay biyaha, taasi micnaheedu maahan inay la tacaali karaan biyo qabow ama cimilo aad u sarreeya. Ma doonaysid in kaligood looga tago dibadda inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Taas ka sokow, qurxinta way fududaan kartaa, iyadoo kuxiran jaakadooda.
Ma ogtahay in eeyaha aan daadin ay u baahan yihiin wax badan oo jarista iyo cadayashada ah. Marka waxaan dhihi karnaa in isweydaarsigani uusan aheyn dayactir hoose.
Hayso nidaam joogto ah cadayashada dharkaaga Aussiedoodles maalin kasta oo kale , oo la jarjaro 8 ilaa 12 usbuuc kasta.
Inta lagu jiro xilliga daadinta, waxaa fiican inaad cadayato dharkiisa maalin kasta si looga hortago jajabnaanta iyo in laga caawiyo in qaar ka mid ah timahaas laga soo saaro dhogorta.
Haddii aad u keento saxaaradaada hagaajiye, waxaad codsan kartaa timo kala duwan - laga soo bilaabo gaaban, boodhadh boodh leh, dhaadheer, qulqulaya, ilaa gooyo dabiici ah.
Fiidiyowgaan wuxuu leeyahay Maximus oo leh xirfadle xirfadle ah oo muujinaya sida loo hagaajiyo ama loo gooyo Aussiedoodle:
Hubi dhegahooda ugu yaraan hal mar usbuucii oo isticmaal a xalka si loo nadiifiyo loona qalajiyo. Dhegahooda udgoon oo casaan raadso. Waxaad dooneysaa inaad iska ilaaliso astaamaha infekshinka bakteeriyada ama khamiirka - waa wax Poodles la halgama.
Xilliga kuleylaha, markay cawsku abuuri doonaan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad hubiso jaakadooda, iyo sidoo kale inta u dhexeysa suulashooda, dhegahooda, iyo dabo dabadooda madaxyada miraha.
Waxaad si gaar ah u dooneysaa inaad daawato dawacooyinka, taas oo noqon karta mid dilaa ah haddii ay ku shaqeeyaan jidhkooda eyga.
Nasiib darrose, Aussiedoodles waxay leeyihiin nooc ka mid ah jaakadaha ay dawacooyinku soo jiitaan - oo ay si fudud ugu dhuuman karaan!
Sida eyda badankood, waxaad u baahan tahay jar ciddiyaha hal mar ama laba jeer bishii . Haddii aad ku maqasho dhag-dhaga-dhaggan dusha ama dhagaxa adag, waa waqtigii goynta.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad isha ku hayso nadaafadda afka eeygaaga. Dhammaan eeyaha waa inay ilkaha si joogto ah u cadayaan.
Si kastaba ha noqotee, toy ama mini Aussiedoodles waxay u baahan yihiin cadayasho maalin kasta. Eeyaha yaryar, guud ahaan, waxay u nugul yihiin xanjada iyo dhibaatooyinka ilkaha.
Haddii ay caqabad ku tahay inaad xoqdo ilkaha ilmahaaga dhogorta leh, waad heli kartaa qalabka ilkaha lagu ciyaaro ama ulo si ay uga caawiyaan hawsha.
Iskuduwaha Shepherd Poodle ee Australiya waa eeyo tamar badan leh . Waxaad u baahan tahay inaad iyaga siiso 60 ilaa 90 daqiiqo oo waxqabad ah maalintii . Mar labaad, tani waxay ku xirnaan doontaa cabirkaaga Aussiedoodle - xayawaanka yaryar ayaa u baahan jimicsi yar.
Oo iyaguna waxay u baahan yihiin waxqabadyo dhab ah, sidoo kale - uma baahna oo keliya socod socod xaafadeed ah. Waxay kaloo u baahan yihiin inay dabaashaan, orodaan, boodaan, ceyrsadaan, wax soo qaataan, oo ciyaaraan.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad Aussiedoodle maskaxda ku hayso. Meelaha xariifka ah ayaa had iyo jeer heli doona wax ay qabtaan haddii aadan shaqo siinin - waxaana laga yaabaa inaadan jeclayn waxa ay go'aansadaan inay sameeyaan!
Marka ay timaado waqtiga quudinta, Aussiedoodles waa u nugul culeyska , ee ha ka badin iyaga. Xaddid daaweynta iyo jadwal joogto ah. Tani waxay gacan ka geysan kartaa xaddidida u janjeeridda cunista cunnooyinka sidoo kale.
Cun iyaga kibib qalalan oo tayo sare leh hilibka oo ah maaddada ugu horeysa ee caafimaad qab ka dhigta. Qadarka cuntada iyo nooca cuntada ay cunayaan waa in lagu saleeyaa da'dooda, cabirkooda, heerka waxqabadkooda, iyo caafimaadkooda.
Celcelis ahaan, Aussiedoodle wuu cuni karaa 2 ilaa 3 koob oo ah eeyga cunnadiisa maalintii , waana in loo qaybiyaa laba cunto.
Dhammaan eeyaha waxay leeyihiin dhibaatooyin caafimaad, laakiin Aussiedoodles waxay ka yar yihiin qaar ka mid ah eeyaha kale. Nasiib iyo daryeel habboon, saaxiibkaaga jilicsan ayaa ku raaxeysan kara a cimriga 10 ilaa 12 sano .
Waxaa jira arrimo caafimaad oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso, oo ay ku jiraan sinta dysplasia, atrophy retinal, xasaasiyadda ivermectin , iyo araga indhaha.
Waxaan kugula talineynaa in saaxiibbadaada dhogorta leh ay booqdaan dhakhtarka xoolaha ugu yaraan hal mar sanadkii, haddii uu jecel yahay iyo haddii kale.
Haddii aad diyaar u tahay inaad keento guri qurux badan oo Aussiedoodle ah, waa fikrad fiican inaad raadiso inaad korsato marka hore, gaar ahaan maadaama noocyo badan oo isku dhafan ay ku dhammaadaan hoyga.
Haddii aad go'aansato inaad iibsato, hubi inaad la macaamilayso a breeder sumcad leh .
Bixiye kasta oo aan kuu oggolaan doonin inaad booqato wuxuu leeyahay badhanka PayPal ee boggooda ama wuxuu leeyahay tobanaan qashin sanadkiiba, waa in laga fogaadaa.
Kuwani waa uun calaamadaha qaarkood kuwa daaqsinka ka ah guriga ama kuwa cunugyadooda ka hela xayawaanka yaryar ee ey.
Sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa soosaarayaasha leh noocyo badan oo kala duwan oo la heli karo hal mar. Fiiri dib u eegisyadooda, sidoo kale.
Had iyo jeer way fiicantahay in la hubiyo badbaadinta maxalliga ah sida Bulshada Aadanaha si loo arko haddii wax Aussiedoodles ah ay halkaas ku dhammaadeen.
Haddii aad horeyba ula xiriirtay samatabbixin maxalli ah oo aad weydiisay wax eeyo kasta oo raadinaya guryo, laakiin aad rabto ikhtiyaarro dheeraad ah, ka dib waad daalacan kartaa degelladan:
Khadadka Samatabbixinta iyo Meeleynta Aussie (St. George, UT)
Badbaadinta Aussie ee Minnesota (Elk River, MN)
Samatabbixinta Poodle Carolina (Pacolet, SC)
Samatabbixinta Poodle ee Houston (Houston, TX)
Northwest Aussiedoodles (Magaalada Malad, ID)
Maskaxda ku hay in aanan aqbali doonin wax soosaarayaal ah, waana inaad xaqiiqdii tahay sameyso baaritaankaaga kahor intaadan mid dooran .
Eyga jaban wuxuu umuuqdaa inuu yahay heshiis wanaagsan, laakiin dhibaatooyinka habdhaqanka iyo jir ahaaneed ee laga yaabo inaad wax ka qabato ayaa ka qaalisan (iyo qalbi jab) mustaqbalka fog.
Haddii lagaa go'aansado inaad iibsato eey Aussiedoodle ah, qashinku wuxuu yeelan karaa 6 ilaa 7 arday, mid walbana wuxuu leeyahay qiime $ 800 iyo wixii ka dambeeya .
Kharashka furball kasta waxaa saameyn ku yeelan doona cabirka, midabka jaakada, iyo jiilka Aussiepoo aad xiiseyneyso. Qaarkood waxay heli karaan qaali sida $ 10,000!
Waa kuwan qaar ka mid ah soosaarayaasha Aussia oo aad iska hubin karto:
Doodleyaasha 'Crockett Doodles' (Greenville, SC)
Cowswood Creek Doodles (Salt Lake City, UT)
Qaar ka mid ah ilaha wax soosaarayaasha caan ka ah waxaa ka mid ah Kafee leh caano (Reno, NV) iyo PuppySpot . Waxa kale oo aad ka eegi kartaa liisaska maxalliga ah ee CraigsList, Facebook, ama joornaalada, halkaas oo aad ka heli karto breeders gaar ah.
Waa wax la fahmi karo haddii aad u malaynayso in Aussiedoodle uusan kugu habboonayn adiga. Dhib malahan! Waxaa jira dhowr Doodles iyo Poos kale oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso.
Waxaa laga yaabaa inay isku egyihiin cabir ahaan iyo dabeecad ahaanba, laakiin waxay yeelan karaan jaakado kala duwan, tababar, iyo baahiyo daryeel.
Labradoodle (Labrador Retriever iyo Poodle mix)
Goldendoodle (Dareemida Dahabka ah iyo Poodle mix)
Bordoodle (Border Collie iyo Poodle mix)
Sheepadoodle (Iskuxidhka Ingiriisiga Hore ee Ingiriisiga iyo Poodle)
Bernedoodle (Iskuxirka Bernese Mountain Dog iyo Poodle)
Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel iyo Poodle mix)
Cockapoo (Cocker Spaniel iyo Poodle mix)
Taasi adiga ayey ku xirnaan laheyd iyo qaab nololeedkaaga. Aussiedoodle ma u dhawaaqaa sida eeyga aad reerkaaga ku dari karto? Shakhsiyaddooda iyo jacaylnimadooda ayaa ka dhigaysa kuwo aad u adag in la iska caabiyo.
Timaha saxda ah, eeyahaani waxay u muuqdaan kuwo u eg orso weyn, laakiin yaan lagu kadsoomin.
Waxay yihiin caqli badan oo tamar buuxda . Kuwani maahan eeyo doonaya inay ku qaboojiyaan fadhiga fadhiga maalintii oo dhan.
Taabadalkeed, waxay rabaan inay lugeeyaan, dabaashaan, socdaan, la ciyaaraan, oo ay la soo doontaan dadka ay jecel yihiin.
Meel kasta oo aad u kaxaysatid, waxaad u badan tahay inaad ka heli doontid tiro dad ah oo doonaya inay la ciyaaraan oo ku dhuuqaan kuwan soo socda.
Sidoo kale waa inaad ka fikirtaa inkasta oo ay yihiin daadiyayaal xilliyeed, waxay u baahan yihiin daryeel iyo taxaddar badan.
Laakiin haddii noocani isweydaarsiga ahi ku helay tayadiisa - firfircoon, caqli badan, deg deg u sameeya xiriiro adag dadkooda , oo ay ka buuxdo jacayl aan dhammaad lahayn - waa mid laga fiirsado.
Maxaad u malaynaysaa Aussiedoodle? Noo soo sheeg fikirkaaga adoo ka tagaya faallooyinka hoose.
Tilmaamahaaga shaqada adag ee Toy Poodle
Diyaar ma u tahay kalsoonida Chusky?
waa imisa shaybaadhka qalinka
boston Terrier oo lagu qasay bulldog faransiis ah
Awstaraaliya shepherd xuduud collie puppy
sida loo isticmaalo eey
adhijir Jarmal badhkiis badhkii dahabiga ahaa